DHAGAYSO: Xog lama filaan ah oo laga bixiyay Sababtii ka dambeysay Isku dhaca Ciidamadii Vila Somaliya & NISA | Garqaad News Agency
DHAGAYSO: Xog lama filaan ah oo laga bixiyay Sababtii ka dambeysay Isku dhaca Ciidamadii Vila Somaliya & NISA
Jul 28, 2017 - Comments off
General Maxamed Ibraahim Guubir oo fallanqeeya arrimaha ammaanka, ayaa ka waramaya waxa Magaalada Muqdisho ku soo celceliyay isku dhacyada u dhaxeeya Ciidamada Dowladda Somaliya.
Iska horimaad Arbacadii Ciidamada Militariga iyo Nabad Suggida ku dhex maray Magaalada Muqdisho, ayaa galaaftay nolosha shan askari, oo midkood uu ahaa Sarkaal Nabad Suggida ka tirsan, laguna magacaabi jiray Ciise Jiijiile.
General Maxamed Ibraahim Guubir, ayaa khibrad darro ku sheegay waxa soo celceliyay in markasta ciidan ka wada tirsan kuwa dowladda, ay ku dagaalaman Magaalada Muqdisho.
Maxamed Ibraahim oo la hadlay Laanta afka Somaliga ee BBC, ayaa sheegay in Saraakiishii ugu sareysay ciidamada isku dhacay looga baahnaa inay la xiriiraan Saraakiisha ka sareysa, kuna wargeliyan waxa meesha ka taagan, oo aan looga baahnayn inay gacmaha isula taggaan.
General Guubir, ayaa qaba haddii xukuno lagu qaadi lahaa ciidamadii horey ugu wada dagaalamay Caasimadda Muqdisho, ay baqan lahaayen ciidamadii is rasaaseeyay maalintii Arbacada.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya, Maxamed C/laahi Farmaajo oo habeenkii Arbacada shir guddoominayay kulan ay yeesheen Guddiga Amniga Qaranka, ayaa amar ku bixiyay in la baaro dhacdadaasi.
Madaxweyne Farmaajo, ayaa qoyska iyo ehelada Ciise Jiijiile ku qanciyay in cadaaladda la horkeeni doono kuwii dilay Jiijiile iyo afar ilaaladiisii ka mid ahayd, kolka guddiga gacanta ku haya baaritanada falkaasi, ay baaritaanada soo afjaraan.
Jimcaha maanta, ayaa waxaa lagu wadaa in Magaalada Muqdisho lagu aaso Ciise Jiijiile, oo tan iyo Arbacadii uu meydkiisa yaalo Xarunta Hay’adda Dembi Baarista ee CID, ka dib markii eheladiisa ay ka soo horjeedsatay inay aasaan, illaa iyo inta ay dilkiisa ka hadlayan Madaxda Dowladda.